धेरै पछि पल शाहकी बहिनीले मुख खोलिन्, गरिन् नयाँ खुलासा ! - Lekh-Patra
धेरै पछि पल शाहकी बहिनीले मुख खोलिन्, गरिन् नयाँ खुलासा !
काठमाडौँ – नेपाली फिल्मका नायक पल शाह अहिले तनहुँ कारागारमा छन्। एक नाबालिग गायिकामाथि करणीको अभियोगमा जेल परेका शाहको मुद्दा लड्नका लागि आर्थिक संकलन गरेको भन्ने खबर बाहिरिपछि उनकी बहिनी रोशनी शाहले लामो स्टाटस लेख्दै स्पष्टीकरण दिएकी छिन्।
उनले मुद्दा लड्नका लागि कुनै रकम नउठाएको बताएकी छिन्। केही युट्युब च्यानलमा पलको मुद्दा लड्नका लागि उनको परिवारले मोटो रकम उठाएको खबर सार्वजनिक गरेपछि रोशनीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कुराको खण्डन गरेकी हुन्।
रोशनीले पल शाह पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेको समयमा परिवारको तर्फबाट एक रुपैयाँ पनि नउठाएको दाबी गरेकी छिन्। अरु कसैले उठाइरहेको खबर आफूले पनि थाहा पाएकाले त्यसो नगरिदिज पनि उनले आग्रह गरेकी छिन्।
उनले लेखेकी छिन् ‘केही युट्युब च्यानल र केही सामाजिक संजालमा पल शाहको मुद्दा लड्नका लागि मोटो रकम उठाएको भन्ने खबरहरु आएकाले उक्त खबरले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । पल शाह न्यायिक हिरासतमा बसेदेखि अहिलेसम्म परिवारका कुनै पनि सदस्यले कसैबाट आर्थिक सहायता लिएका छैनौ र आर्थिक सहयोगका लागि कतै पनि आग्रह गरेका छैनौं।’
उनले आफूहरुले कानूनी राज्यमा विश्वास गर्ने भन्दै कानूनको संरक्षण पाउँनेमा विश्वस्त रहेको समेत बताएकी छिन्।
विमला वली भन्छिन् – मलाई त्यतिकै फसाइयो
बालेनको अर्को निर्णयले तहल्का, घर भाडामा लगाउने नियममा ठूलो परिवर्तन !
प्रेम आलेले भने – ‘कुटेको छैन, यसो सम्झाएको मात्रै हुँ’
प्रेम आलेले फेरी मच्चाए ‘वितन्डा’, एयरलाइन्सका अध्यक्षलाई भकुर्नु भकुरे !
Solid waste to be disaggregated at source
निकुञ्जमा फेला परे अचम्मका मानिस, वास्तविकता थाहा पाउँदा सेना समेत चकित